China Custom Heavy Duty Steel Structure Welded Parts abavelisi kunye nababoneleli |THYH
UkuweldaIinkonzo zentsimbi eMild, iStainless Steel kunye neAluminiyam
Metal Fabricationumzimba oomatshini bentsimbi engenastainless okanye iitafile zentsimbi engenasici.
Inkqubo: Ukusika, ukugoba,Ukuwelda,ilungisiwe.
Iimveliso Sheet Metal Fabrication, Izakhelo, izibiyeli, iZakhiwo, iZitendi, iiTafile, iiRailings, ii-Grills, iiRacks, ii-Enclosures, iiCase, iZixhobo zeMetal, iiNcingo, umzimba womatshini njl.njl.
Siqhuba iintlobo ezi-3 eziphambili zeendlela ze-welding ezixhomekeke kuluphi uhlobo lwetsimbi olufunekayo.Sinako ukunika iingcebiso kwezona zinto zibalaseleyo kunye nenkqubo ye-welding kwiimfuno zakho.
I-TIG imele i-Tungsten Inert Gas welding, kwaye yenye yeendlela eziqhelekileyo ezisetyenziswayo.Nangona kunjalo, eneneni ifuna obona buchule, iqela lethu likhethekileyo. Ukuwelda kwe-TIG kwahluke kakhulu kwaye kuyasebenza kakhulu xa kusenziwa ngumntu oyingcali.Uninzi lweeprojekthi ezinkulu ziya kusebenzisa indlela ye-TIG.
I-MIG imele i-Metal Insert Gas welding kwaye kunzima kakhulu ukuyenza.Indlela ye-MIG ibandakanya ucingo olubhityileyo olutyiswa ngesixhobo sokuwelda, njengoko lutyiswa, lufudunyezwe endleleni.Le ndlela intekenteke ngakumbi idla ngokukhethwa xa kusetyenzwa ngeentsimbi ezibhityileyo.Iinkonzo zethu zokuwelda ziquka i-MIG welding kunye ne-ARC kunye ne-TIG.
Ukuwelda kwe-ARC:Sebenzisa kwintsimbi ephakathi naxa iintsimbi ezingqindilili kunye nemathiriyeli kufuneka.
Ukugqiba Sinokuyigqiba i-weld ukusuka kwi-rough grind, ipolish yesipili kwaye ilungiselelwe ukugquma umgubo
Ezinye iimveliso ezenziweyo:
1. Ngaba ungumzi-mveliso okanye inkampani yokurhweba?
Singumzi mveliso olungiselelwe wena.
2: Lingakanani ixesha lakho lokuhambisa?
Ixesha lethu lokuhambisa lihlala li-10 ukuya kwiintsuku ezingama-25, okanye ngokobungakanani.
3: kuthekani ngemigaqo yentlawulo?
I-30% T / T kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Sinikezela ngefoto, ividiyo okanye iQela leSithathu ukuba lijonge.
4: Ngaba ubonelela ngeesampulu ?Ndizakufumana ixesha elingakanani iisampulu zakho?
Ewe, isampuli yasimahla iyafumaneka.Kuxhomekeke kwizinto kunye noyilo, iintsuku ezi-5 ukuya kwezi-7.
5. Ziziphi iimveliso zakho eziphambili?
Inkonzo yethu yokwenziwa ngolu hlobo lulandelayo.
● ukwenziwa kwentsimbi yeshiti
● sheet metal stamping / welding / CNC punching / laser cutting
● amacandelo entsimbi
● ukwenziwa kwentsimbi enzima.
● Enye indawo ebiyelweyo yentsimbi
6. Uqinisekisa njani ulawulo lomgangatho?
Ukuhlolwa komgangatho we-100% ngaphambi kokupakishwa.
Iinkonzo zethu zemveliso:
Ukuhamba kwethu kwemveliso:
Qhagamshelana nathi ngokukwikowuti kwaye ufunde ngakumbi malunga nendlela esinokugcina ngayo ixabiso lakho.Unokuhlala ulindele ingqalelo yethu ekhawulezileyo.Kwaye sijonge phambili ekusekeni ubudlelwane beshishini ixesha elide kunye nawe.Asifuni nje ukuba ngumthengisi wentsimbi yakho kodwa kunye neqabane lakho eTshayina.Wamkelekile ukuthumela imizobokunye neesampuli kuthi ukuze sinikeze.
Ngaphambili: I-Welding yesiko kunye ne-Fabrication Metal Parts evela kwi-China Fabrication Factory
Okulandelayo: Umgangatho oLungileyo uMvelisi we-Inductor waseTshayina i-Ikp yoMbane yenza ngokwezifiso i-DMC Coil, UL/Ce/RoHS Certified
Ukwenziwa kolwakhiwo lwentsimbi
Steel Ulwakhiwo metal Welded
Ulwakhiwo lwentsimbi amacandelo adityanisiweyo
Le nkampani ineendlela ezininzi esele zenziwe ukuba zikhethe kwaye inokwenza inkqubo entsha ngokwemfuno yethu, emnandi kakhulu ukuhlangabezana neemfuno zethu.
Ngu-ron gravatt ovela eSierra Leone - 2018.09.16 11:31
Kunokuthiwa lo ngoyena mvelisi sidibene naye eTshayina kolu shishino, siziva sinethamsanqa ukusebenza nomenzi ogqwesileyo.
NguPatricia ovela eLatvia - 2018.06.03 10:17
Ukwenziwa Kwentsimbi yesiNtu eSt...
Icwecwe leNsimbi leSiko leMetal Fa...
Ishiti leSisimbi lokuFakwa ngokweSitembu seSitampu saMalungu asuka eTshayina kwiFactory Into yobuchwephesha bokusitampu Izinto ezifumanekayo zeCarbon steel, intsimbi eshushu editshiwe, intsimbi engatyiwa, ialuminiyam, okanye ngokwendlela elungiselelwe umphezulu woNyango electroplating, uPowder coating, Conversion, Passivation, Anodize, Alodine, Electrophoresis , njl. Ukwenza iNkqubo yokuFakwa-Isitampu-Sesibini-Ukunyathela-I-Threading-Burring-Welding- Polishing- Ipeyinti yokutshiza-Ukupakisha ukunyamezela +/- 0.02~0.05 mm Measu...